गफ ! .....: कथा : माथ्लो घरको ढिकी
Posted by दीपक जडित at 5:17 AM
निक्के मार्मिक कथा लैख्‍नु भएछ । गंगे कार्कीको ढिकी भत्काएरै भए पनि ईज्जत जोगाउन खोज्ने शिबरामको मनोबृत्तीको राम्रो चित्रण छ ।
बाँकि तपाईको कथा र गजलमा पनि गाँउघरको सुगन्ध भएको र ठेट नेपाली शब्दहरुको उचित प्रयोग गरीएको हुन्छ । जसले गर्दा पढ्दै जाँदा यौटा पात्र कथाको पात्र मात्रै नभई चिनजानको मानिस भएको जस्तो आभाष दिन्छ, जुन मलाई भने एकदमै मन पर्छ ।
यस् कथामा ' साबित्रा ' पात्र ले प्रौढ शिक्षा र केटाकेटिलाई ट्युसन पढाउने गर्छिन भनेर लेखिएको छ । भने पछी साबित्रा केही शिछित नै देखिन्छिन । यतिको शिछित नारिले आफ्नो श्री मान लाई त्यसरी हेपेर बोल्न सक्छ र ? अब रह्यो साबित्रा गङ्गे पात्र सँग लसपस भएको कुरा , यो चाँही हाम्रो समाजदेखिन्छ । सोझो श्रीमान लाई हेपेको कुरा प्रसस्त देख्न सुन्न पाईन्छ ।
पुरुष पात्र 'शिव राम ' जस्ता सिधा पात्रहरुको पक्षमा यो कथाले न्याय गरेको छ ।
समाज मा नारी हेपिएर जनाबरको जस्तो जिन्द गि बिताउनु परेको कथा -उपन्यास धेरै मात्रामा पढियो । दिपक जि को कथामा चाँही पुरुष पनि श्री मती पीडित हुन सक्ने यथार्त लाई बडो सजिब सँग प्रस्तुत गर्नु भो ।
हाम्रो समाज मा देखिने यस्ता बिकृतिलाई सरल शब्द च् यन गरेर बडो मार्मिक सँग प्रस्तुत गर्नु भएको यो कथाले नौलो स्बाद दिने छ साहित्य प्रेमी लाई र बि स्तारै मान्छे हरु श्रीमती पीडित पुरुष का लागि बकालत गर्ने छन ।
समाज का यस्तै बिकृतिहरुलाई कथाको रुप दिदै लेख्दै जानु होस् , साहित्य पनि समाज को एना भएको हुनाले मान्छे हरु ले आफ्नो अनुहार यस्तै साहित्य मार्फत देख्दै जाउन । निरन्तरताको शुभ कामना हिर्दय देखी नै ।
सजीब चित्रण गरेको छ हाम्रो समाजको एउटा पाटोको! भाषा-शैली र संवाद पनि सललल बगेको छ, पढ्दा कतैपनि ठेस लाग्दैन।
कथा सकिँदाचाहिँ कता-कता के-के अझै आउन बाँकी जस्तो लाग्यो। सफल कथाले छोड्ने रन्को यहि होला शायद।
अर्कोतिर शिबराम चाहिनेभन्दा सोझै भएको हो। प्रमाणविनै त केहि गर्ने कुरा त भएन तर रंगेहात भेटेपछि त अलिक छिनोफानो गरेरै छोड्नु पर्ने हो। यसपछि शिबराम जोगी भयो होला र समाजले फेरि उसैलाई लाछी र नामर्द भन्यो होला।
अर्कोतिर यो कथाको अर्को पाटो त्यो नहुन पनि सक्छ जुन हाम्रो दिमागमा आएको छ। शिबरामलाई देउताजस्तो गरेर पेश गरिएको छ। कुनै पनि ब्यक्तिमा केहि न केहि कमजोरी त हुन्छन् नै। साबित्री यहाँ देखाएजस्ती साबित्री हुनुमा शिबरामकै यहाँ नदेखाईएका (अथवा अप्रत्यक्ष रुपमा देखाईएका) कमजोरीको पनि केहि योगदान छ कि भनेर शंका गर्नु पनि गलतचाहिं नहोला।
कथा निकै मार्मिक छ। र यहाँ शिवरामको मौनताभित्रको पीडालाई मजाले चित्रण गर्नुभएको छ दीपकजीले। जसलाई सामान्यता लोग्नेमान्छेको स्वास्नीमान्छेप्रतिको डोमिनेसको वास्तविकता र त्यसमाथिको थपथाप हाउगुजीले ढाकेर राखेको छ सबैको नजरमा। त्यही अदृष्य र अब्यक्त पीडा बाहिर आएको छ दीपकजीको कथाबाट। जुन पीडा हाम्रै वरिपरिको उस्तै शिवराम पात्रलाई हेर्ने हो भने पनि सायदै हामीले उसको भित्री मर्म र वास्तविक अवस्था बुझ्न सक्छौ, या कल्पना गर्न सक्छौ होला। तर पनि यस्ता घटना या अवस्था सृजना भइरहेको हुनसक्छ। र त्यही कुरा शिवरामको झैँ वास्तविक रुपमा बाहिर आएको खण्डमा या त त्यसलाई त्यही रुपमा स्वीकारेर एक्सेप्सनल केस भनेर भनिने गरिन्छ। या त दीपकजीले भनेझैँ हुतीहारा या नामर्दको संज्ञा दिइन्छ हाम्रो समाजमा। अथवा दुवै मत बोकेका फरक फरक जमात पनि हुनसक्छ। तर सम्बन्धित व्यक्तिको व्यक्तिगत मनोभाव र अवस्था, चाहना र उसले भोगेका भित्री पीडा र त्यसपीडाले जन्माएको बाहिरी प्रतिक्रियाप्रति खासै वास्ता गरिदैन। त्यसलाई खाली सामाजिक या पारिवारिक कुरासँग गाँसेरै बढी मात्रामा बुझिने या विश्लेषण गरेर सामान्यीकरण गर्ने गरिन्छ। समस्या र पीडलाई बुझ्दा व्यक्तीको भनेर बुझिन्छ। तर त्यसको नतिजा या बाहिरी स्वरुपलाई चाहि अनेकौ जालोभित्र राखेर सामाजिक कुराको रुपमा हेरिन्छ। हुन त यो मेरो बुझाई मात्रै पनि हुनसक्छ।
साँची नै शिवरामको सोझोपनाको बदलामा साबित्रीको व्यवहार चाहि अप्रिय नै छ। त्यो चाहि मानवीय व्यवहार भएन। त्यस्ता स्वास्नी पनि हुन्छन् होला। तर यहाँनेर लुनाजीको विचार पनि जोडिएर आउँछ। साथै आखिर शिवरामको सोझोपना र जे भएपनि चुपचाप झेल्ने स्वभावकै बदलामा मात्रै साबित्रिले त्यस्तो व्यवहार गरेको हो? भन्ने पनि मनमा प्रश्न उब्जियो। सायद यो प्रश्न चाहि माथी बसन्तजीले 'अप्रत्यक्ष देखाइएका कुरा' भनेर इंगित गर्नुभएको कुरासँगै गाँसिएर आउँदो हो। अनि शिबराम र साबित्रीको सम्बन्धबीच 'अप्रत्यक्ष देखाइएका कुरा'भित्र थुप्रै पाटो लुकेको हुनसक्ने देखिन्छ। जसको कारणले शिबराम चुपचाप बस्न अझ बाध्य भएको र साबित्रीको गलत कामलाई हाकाहाकी अंकुस लगाउन नसकेको र त्यही कारणले साबित्री अझ अघि बढिरहेको पनि हो कि भन्ने लाग्छ।
कथा लेख्नुभन्दा अगाडी नै जब दिमागमा यो कथाको रुपरेखा कोर्दैथिएँ त्यसैबेला यो कथाले तालीको शट्टामा गाली खुवाउँछ है भन्ने पनि लागेको हो त्यसको निम्ती कथा शुरु गर्नु अगाडी कुनै चलचित्रमा देखाईने झैं पात्र तथा घट्ना काल्पनिक छन् ईत्यादी लेखेर पनि नहुने । त्यसैले जस्तो कथा उम्रियो दिमागमा त्यस्तै लेखेँ । शिबराम पात्र चाहिने भन्दा धेरै सोझो भएको र उसकी साबित्री चाहिने भन्दा धेरै फटाई भएकि ( त्यसो त फट्याँई कहिल्यै चाहिने हुँदैन ) भएपनि सामान्यताको परिधी नाघेर हाम्रो समाजभित्र यस्ता पात्र पक्कै भेटिन्छन । कथाले उधिन्न भ्याएका बिसँगती र अध्कल्चो उधिनेर छोडेका असँगतीहरु माझ कथामा त्यसपछि के भयो भन्ने कुरा पढ्नेले नै टुँगो लगाउनु पर्ने गरेरै छोडेको हुँ ।
र मैले बुझेको यौटा कुरा लुनाजीलाई , एजुकेटेड हुनु यौटा कुरा हो अन्डरस्ट्याण्डिङ्ग हुनु अर्को कुरा हो तसर्थ प्रौढ कक्षा पढाउने अथवा स्कूल कलेज नै पढाउने किन नहुन् ब्याक्तिगत तवरमा क्षुद्र नहोलान् भन्ने हुँदैन र मान्छे पतनको बाटो लागेपछि पतित नहुञ्जेल सम्म म पतनको बाटोमा छु भनेर ख्याल गर्दैन अथवा त्यो ख्याल आयो भनेपनि पतित नहुञ्जेल आफैंलाई टेर्दैन । साबित्रीको चरित्रमा नलेखेरै यो कुरा देखाउन खोजेको हुँ । लेखेको भए अरु उपयुक्त हुने रहेछ भन्ने यतिखेर लाग्यो । वसन्तजी र कैलाशजीको प्रतिक्रियाले कथामा नदेखिने गरेर रहेको केही पाटोहरु देखाउनु पर्ने रहेछ भन्ने लागेको छ । सबैलाई धन्यवाद प्रतिक्रियाको लागी ।
कथाको शीर्षक र विषय वस्तुको तादात्म्यता एकदमै मिलेको देखें ।
पाठकलाई शुरू देखि अन्त्यसम्म कुतुहुलताकासाथ डोर्यौउने क्षमता पनि देखें । तर साबित्रीको व्यवहार भने अलि अतिशयोक्ति लाग्यो ।
बांकी त मैनालीको कथा पढ़े जस्तो लाग्यो ।
बधाई र शुभकामना ।
धन्यवाद बासुदाइ , साबित्रीको रुखो ब्यावहार त मलाई नै पनि मन् नपरेको हो ।